Local News Archives - Page3of 43 - Khitamyin
အချိန်ပိုလုံးဝမပါတဲ့ နွေဦး ဖလား ရှူံးထွက်ပွဲစတင်နေပါပြီ
October 9, 2021Ko Khit0 Comments
အချိန်ပိုလုံးဝမပါတဲ့ နွေဦး ဖလား ရှူံးထွက်ပွဲစတင်နေပါပြီ ဒီပွဲမှာ…ရမ်းသမ်းယုတ် အသင်း ( နှင့်)ဒေါင်းသွေးမာန်. အသင်းတို့ အကြိတ်အနယ်ယုဉ်ပြိုင်မဲ့ပွဲ နောက်ဆုံး ရှုံးထွက်ဗိုလ်လုပွဲ ကြီးပါခဗျာ.. ခုဆိုရင်ဖြင့်သန်း 50.သော လူထုပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း…..
တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုလုံးဝရပ်သွားပြီးနောက် မြန်မာ့ငွေဈေး ဆီဈေး လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းဂယက်
October 8, 2021Ko Khit0 Comments
တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုလုံးဝရပ်သွားပြီးနောက် မြန်မာ့ငွေစျေး ဆီစျေး လူသုံးကုန်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းဂယက် တရုတ်နယ်စပ်ကြယ်ဂေါင်ကို စီးပွားရေးအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့အကြောင်းပြကာ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မူဆယ်မြို့ ဆင်ဖြူဂိတ်၊မန့်ဝိန်းဂိတ်၊နန်းတော်ဂိတ်၊ ချင်းရွှေဟော်၊ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း)ဝန်တိန်ပေါက်၊ကျင်စန်းကျော့ အစရှိတဲ့ နယ်စပ်ဂိတ်များအားလုံးကိုအောက်တိုဘာလ…
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း John McCain Freedom Award ရရှိလို့ ဝဏ္ဏမောင်လွင် သွေးတိုးနေဟုသိရ
အမေရိကန်နိုင်ငံ International Republican Institute (IRI) က ချီးမြှင့်တဲ့ John MaCain Freedom Award ဆုကို သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ရရှိသွားလို့ မအလဝန်ကြီး…
Brave Bar နဲ့ စစ်ကောင်စီဘယ်လိုပက်သက်နေတာလဲ..?
ယမန်နေ့ ည အောက်တိုဘာလ ၇ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကန်ရိပ်သာလမ်းရှိ Brave Bar အမည်ခံ Clubအား စစ်ကောင်စီတပ်မှ ည ၁၁:၄၅ နာရီတွင် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာ…
စစ်တပ်ထဲမှ အရာရှိကြီးတွေ အတွက် လမ်းစဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖြိုးသန့်
စစ်ကောင်စီ၏ အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖြိုးသန့်သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်များ ထိန်းချုပ်ဒေသသို့ ထွက်ပြေး ခိုလှုံရန် ကြံစည်နေချိန်တွင် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည်ဟု တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ၏…
NUG အစိုးရအပေါ် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးဖို့ ဌာနဆိုင်ရာရုံးတစ်ခုလျှင် အကောင့်နှစ်ခု နှုန်း ဖွင့်လှစ်ကြဖို့ စစ်ကောင်စီက ညွှန်ကြား
October 7, 2021Ko Khit0 Comments
NUG အစိုးရအပေါ် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးဖို့ ဌာနဆိုင်ရာရုံးတစ်ခုလျှင် အကောင့်နှစ်ခု နှုန်း ဖွင့်လှစ်ကြဖို့ စစ်ကောင်စီက ညွှန်ကြား မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၆ လူမှုကွန်ယက် Facebook…
PDF တွေသတ္တိရှိတယ်ဆိုရင် ကောင်းဗွိုင်တွေလို သေနတ်ချင်းယှဉ်ပစ်ချင်တယ်ဟု ဘူးလတ်လှဆွေက စိန်ခေါ်
ဘူးလတ်လှဆွေ၏အိမ်အားဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှု့အပေါ် ဘူးလတ်လှဆွေကြေကွဲ😁 မနေ့က ဘူးလတ်လှဆွေ၏ နေအိမ်အား နေပြည်တော် PDF မ်ားမွ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု့အပေါ် ဘူးလတ်လှဆွေအား BBC မှဖုန်းဆက်မေးမြန်းခဲ့ရာ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးဗျာ၊နေပြည်တော်လို အထင်ကရနေရာတွေမှာ PDF တွေကစိတ်ကြိုက်…
ကျပ်ငွေလဲနှုန်း ထိန်းလာနိုင်ပြီလို့ ဗဟိုဘဏ်ပြောဆို
ငွေလဲနှုန်း အကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်နေပြီး ဈေးတွေက ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေပြီလို့ စစ်ကောင်စီခန့် ဗဟိုဘဏ် အကြီးတန်းအရာရှိကြီးတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးက ၆၀…
အဝေးပြေးခရီးသည်တင်ကားတွေပေါ်က လူမဲ့ကုန်စည်တွေကို ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးနေ
October 6, 2021Ko Khit0 Comments
အဝေးပြေးခရီးသည်တင်ကားတွေပေါ်က လူမဲ့ကုန်စည်တွေကို ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးနေ (အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို လူမဲ့ကုန်စည်အဖြစ် မပို့ဆောင်ကြရန် သတိပေးထား) ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၆ အဝေးပြေးခရီးသည်တင်ကားတွေပေါ်က လူမဲ့ကုန်စည်တွေကို ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးနေတာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်ပြီး Delivery…
NUG ကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလို့ ပြင်သစ်သံအမတ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝဏ္ဏမောင်လွင် ခေါ်ယူသတိပေး
NUG ကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလို့ ပြင်သစ်သံအမတ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝဏ္ဏမောင်လွင် ခေါ်ယူသတိပေး နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၆ SAC လက်အောက်ခံ နိုင်ငံခြားရေးဌာန ဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က NUG ကို…
အာဆီယံကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါပြီ ချွေတာစုဆောင်းပြီး အသင့်ပြင်ထားရပါတော့မယ်(မြန်မာပြည်ကြီး ကံကောင်းပါစေ) အာဆီယံကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါပြီ။ သဘောကတော့ ဒီဘက်ကလဲ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ အမေစုတို့ကို ဘာဖြစ်ဖြစ် လုံးဝပေးမတွေ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အာဆီယံကလဲ…
အောက်တိုဘာ ၂၆-၂၈ တွင် ပြုလုပ်ရန် ရှိသည့် အာဆီယံ ထိပ်သီး စည်းဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခွင့် မပြုရန် သဘောတူ လိုက်ကြခြင်းဖြင့် အာဆီယံ၏ သမိုင်းတွင် ရှားရှားပါးပါး တင်းမာစွာ…
အများပြည်သူကိုရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ရှေ့နေဦးခင်မောင်ဇော်ကို မီဒီယာဖြင့်စကားမပြောရန်တားမြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးခေါင်းဆောင်ပြော နေပြည်တော်မှာ တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေဦးခင်မောင်ဇော်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက်နေ့မှာ စစ်ကောင်စီက တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက…
Copyright © 2021 Khitamyin